I-Vihang Farmhouse: Igumbi lase-Florican - I-Airbnb
I-Vihang Farmhouse: Igumbi lase-Florican
Nashik, Maharashtra, i-India
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Madhumita
Asinikezi noma yiziphi izaphulelo zokubhukha okungaphansi kwezinsuku eziyi-7 noma sithathe ukubhukha ngaphandle kwe-Airbnb.
I-Vihang Farmhouse inomoya, iyakhanya, futhi ilula inombono omuhle wamanzi angemuva nezithafa zeDamu laseGangapur, Indawo Ebalulekile Yezinyoni! Sitholakala kuhambo lwemizuzu engama-20 ukusuka eSula, York, nasezivinini zaseSoma nasezindaweni zewayini ezingaphesheya kweDamu laseGangapur. Sinamagumbi okulala amathathu: Igumbi leFlorican, Igumbi le-Owlet kanye neGumbi leQuail. Siphinde sihlinzeke ngesidlo sasekuseni.
I-Vihang Farmhouse iyi-bungalow ezimele epulazini elizimele elinezihlahla ze-teak kanye nomango. Kuphinde kube yikomkhulu le-Nature Conservation Society yaseNashik, i-NGO yokugcinwa kwezilwane zasendle esebenza esifundeni saseNashik kusukela ngo-1994.
Sinezinja ezi-3 emagcekeni, ezingavunyelwe ukungena endlini kodwa ezizulazula ngokukhululekile ngaphambili nasemagcekeni angemuva.
Njengoba isendaweni enokuthula ngasechibini laseGangapur, iVihang Farmhouse iyindawo ekahle yokubaleka impelasonto noma ngaphezulu! I-Sula Vineyards iyimizuzu engu-20 ukusuka kwelinye usebe lolwandle, kuyilapho idolobha liqhele ngesigamu sehora. Ungaqiniseka ngokuthula okuphelele nokuzola, ukuhuba kwezinyoni nomoya ohelezayo, nokunye ukushona kwelanga okumangalisayo ngempela!